Iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra amin'ny Minecraft Pocket Edition 0.12 | Androidsis
Manuel Ramirez | | Lalao Android, Minecraft, About us
satria Ny Minecon dia notazonina izay niangonan'ny mpankafy Minecraft rehetra, nivoaka ny vaovao nanomboka tamin'io kaonferansa io hanambara ny fahatongavany amin'ny faran'ny taona ho an'ny Minecraft: Story Mode na inona no ho vaovao amin'ny fanavaozana lehibe miandry antsika ao amin'ny Minecraft Pocket Edition. Ny kinova ho an'ny fitaovana finday izay efa tadiavin'ny maro amintsika hatramin'ny nanombohantsika ny fampiharana taona vitsivitsy lasa izay ary gaga tamin'ny dingana voalohany an'ny Minecraft amin'ny telefaona Android.
Satria avy be ny orana nanomboka tamin'ireny andro ireny, ny fanavaozana manaraka sy vaovao hitondra vaovao bebe kokoa raha azo atao noho ny 0.11 teo aloha de nanampy sambo, hoditra ary jono anisan'ireo mampiavaka azy vaovao vaovao. Ilay 0.12 vaovao sy ho avy dia mety hanakaiky ny dikan'izany tamin'io fotoana io ny fahatongavan'ireo tontolo sy lava-bato tsy manam-petraHatramin'ny nitantaran'i Minecon anay ny momba ny vaovaon'izy ireo, ao anatin'izany ny Nether sy ny vokatry ny toetr'andro toy ny orampanala na orana, antsipirihany izay ananantsika amin'ny PC ary manome tanjaka lehibe kokoa an'izao tontolo izao izay ezahantsika ho velona.
1 Fanavaozana lehibe no miandry antsika
2 Fanisana amin'ny fomba PC
3 Fanaraha-maso vaovao
4 Fanohanana fanaraha-maso
5 Fifanarahana manokana
11 Sarimiaina vaovao
12 Trano vaovao sy mozika vaovao
13 Andian-bahoaka vaovao
14 Vato vaovao
15 Mazava ho azy
Fanavaozana lehibe no miandry antsika
Ary tsy mijanona ao amin'ilay hoe Nether sy ny fotoana fotsiny ilay zavatra, fa hiatrika ny fanohanan'ny tompon'andraikitra amin'ny lalao izahay, mozika ary fanovana lehibe amin'ny inona ny lisitra, izay ho mihoatra ny PC.
Antony iray hafa ahafahantsika manomboka mitebiteby noho ny fahatongavan'ilay kinova manokana Minecraft: Windows 10 Edition. Ity kinova vaovao noforonina manokana ho an'ny Windows 10 ity dia hanolotra ihany koa fa afaka mandeha amin'ny efijery mikasika ny solosaina birao isika saika tsy misy korontana.
Fanisana amin'ny fomba PC
Ao amin'ny Minecraft Pocket Edition dia hanana isika ny interface interface nentim-paharazana ho an'ny PC amin'ny maody velona. Inona no dikan'ity? Eny, tsy maintsy manomboka mitadidy ny fomba fahandro rehetra ianao, satria ho hadinontsika ny asa tanana tsotra sy mora izay nidika tamin'ny fitaovana finday iray hanakaikezana kokoa izay ao amin'ny PC.
Hanampy ity akora betsaka kokoa raha azo atao ka tsy ho ela vao hahalala ny fomba fahandro tena ilaina, satria matetika izy ireo dia mitazona ambaratongam-pahefana lozika amin'ny famoronana.
Ary rehefa hampiasa ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny efijery mikasika isika dia hahita fa nesorina ny bokotra mitsambikina. Ankoatr'izay dia ho hitantsika vaovao vao mihazakazaka sy misokosoko.
Mahatonga any afaka mampihetsika ny fitsambikinana mandeha ho azy isika avy amin'ny sehatr'asa raha toa ka tsy tianao io fomba vaovao io ao amin'ny Minecraft PE.
Ny iray amin'ireo vaovao mahaliana indrindra dia izao manomboka izao afaka mampiasa ny fifehezantsika manokana isika hahafahanao milalao ilay Minecraft Pocket Edition lehibe. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia fantatsika fa ny roa voamarina dia ny Xbox 360 sy Xbox One.
Minecraft PE tsikelikely lasa lalao video tsaratsara kokoa izy io miaraka amin'ny safidy bebe kokoa noho ny taloha ary ankehitriny dia ho hitantsika fa ny UI na ny interface dia azo namboarina araka izay tadiavintsika. Azonao atao ny mamindra ny bokotra, fiainana ary bara fanandramana amin'ny toerana mifanaraka indrindra amin'ny fomba filalaovantsika.
Ny iray amin'ireo tanjona rehefa milalao amin'ny maody velona dia ny mihazona sakana obsidian hamoronana vavahady izay mitondra antsika any Nether. Dimension toa ny helo ary ahitantsika fahavalo vaovao, fitaovana ary zavatra.
Azontsika atao ihany ny mamorona an'io vavahady io miditra amin'ny Nether avy amin'ny takelaka Android na finday anay.
Iray amin'ireo antsipiriany momba ny kalitao hanomezana anay fahatsapana tsara kokoa rehefa mitangorona manerana an'izao tontolo izao noforonin'i Minecraft. Ny toetrandro, na avy ny orana na ny oram-panala, hananantsika izany ao amin'ny kinova vaovao. Aleo koa manantena avelao ny varatra hitifitra toy ny fanaon'ny PCInona no tsara kokoa noho ny fialofana ao amin'ny tranonao na ny trano mimanda anao, rehefa avy ny orana?
Ny iray amin'ireo fanovana lehibe ho an'ny PC dia ny fisehoan'ny hanoanana. Araka ny Notereny izahay hamatsy sakafo isan-karazany mba hahafahanay mihinana amin'ny diany. Bara faharoa izay hiseho amin'ny kinova vaovao ary hanery anao hanana zaridaina anao hanome sakafo anao isan'andro.
Ny iray amin'ireo vaovao tsara indrindra tamin'izany fotoana izany ho an'ny PC dia ny herinaratra manaitra ny karazan-javatra rehetra toy ny fitaovam-piadiana na fiadiana. Miaraka amin'ireo teboka niainana azo, azontsika ampiasaina izy ireo mba hanaovan-tsabatra amin'ny sabatra ary hanome azy ireo toetra majika.
Toy ny sabatra voahaingo amin'ny potion, ankoatry ny fahaverezan'ny fiainana, dia azonao atao izany hery majika toy ny hafainganam-pandehan'ny hetsika, fitsambikinana avo kokoa na fiterahana indray.
Hanana a fitaovana vaovao hamoronana karazana potion rehetra ary amin'izany dia mahereza kokoa.
Ny fipoahana TNT dia nohavaozina ary ny vokatry ny sombintsombiny hita amin'ny fahavalo samihafa izay hihaonantsika toy ny rehefa may izy ireo na mitsambikina slime.
Trano vaovao sy mozika vaovao
iray hafa Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny Minecraft dia ny fizahana izao tontolo izao manodidina antsika ary raha efa mahita tranomaizina vaovao toa ilay iray natambatra isika, dia vao mainka tsara kokoa.
Ny mozika dia iray amin'ireo fanampiana tsara indrindra ho an'ny kinova finday. Ny piano an'ny C418 dia azo antoka fa Ankehitriny.
Ny golem vy miaraka amin'ny raozy hiseho ho iray amin'ireo fanampiana vaovao. Ny Ocelots no ho ny vahoaka marobe hafa izay eo, izay karazana saka miseho any anaty ala. Ary tsy afaka manadino ireo mponina ao an-tanàna na ireo mponina izay ho lasa zombie isika izao.
Amin'ny zavatra rehetra nambara hatreto, Mbola hita ihany ireo sakana rehetra izay ahafahantsika manaitaitra sabatra, mamorona potion ary manamboatra fiadiana simba mihitsy aza. Ny antsipiriany mahaliana dia ny ahafahanao manangona ny lohan'ny andian-jiolahimboto sasany mba handravahana ireo tranga manjombona ao an-tranonao.
Ho toy izany koa isika alohan'ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra ho an'ny Minecraft Pocket Edition. Ny tsy fantatsika dia ny daty hahatongavany ao amin'ny kinova ho an'ny Android, fa raha fantatsika fa ny fanontana ho an'ny Windows 10 dia havoaka amin'ny andro mitovy amin'ny rafitra fiasa, azo antoka fa ho feno fahagagana io herinandro io.
Minecraft izay tsy hijanona hahagaga antsika amin'ny endriny ho an'ny finday ary izany dia mitaky dingana lehibe amin'ny 0.12.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Minecraft » Inona no miandry antsika ao amin'ny Minecraft Pocket Edition 0.12
Betsaka ny fivoahan'ny angona avy amin'ny LG G Pro 3